Ụlọ ọrụ Omenala
Enyemaka otu bụ ọdịbendị ụlọ ọrụ anyị na -agbanwe agbanwe, ahụmịhe ụlọ ọrụ na -ekerịta, zere otu ihe mehiere ọtụtụ oge, ndị ọrụ na -enyere ibe ha aka, pụọ ma ọ bụ mmadụ nwere mkpa azụmahịa siri ike ime ngwa ngwa, ndị otu niile na -arụkọ ọrụ ọnụ, dozie nsogbu ahụ nke ọma, nyere ndị ahịa aka mezue ọrụ ngwa ngwa.
Tọrọ ntọala na 2011, ụlọ ọrụ ahụ na -agba mbọ maka mmepe na ire ngwaahịa lace. O nwere ụlọ ihe nrụpụta nke ya, ime ụlọ nlele na ụlọ nkwakọba ihe ngwaahịa. Oge mmepe ngwaahịa ọ bụla, enwere ụdị akwa na ngwa ọhụrụ iji nye. Ụdị uwe ụlọ na nke mba ọzọ, nnukwu ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ụdị ngwa elektrọnik, wdg Mmepụta uwe na -ebupụ na United States, Europe, Japan. Na 2017, guzobere Ngalaba Azụmaahịa Azụmaahịa Ofesi, mepere ụlọ ahịa ịntanetị emere na China, ma sonye na ihe ngosi esenidụt. Mba ndị sonyere gụnyere Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Turkey na obodo ndị ọzọ.
Omenala azụmaahịa na-agba mbọ maka elu, mmụọ otu enyemaka, iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa maka ngwaahịa lace, imepụta ọnọdụ mmeri bụ ebumnuche anyị na-agbanwe agbanwe.
Ịdị n'otu, nke dị mma, ihe ọhụrụ, ọkachamara na ịrụ ọrụ nke ọma. Ogo ngwaahịa bụ ndụ ụlọ ọrụ. Ezi ọrụ bụ àkwà mmiri anyị iji kpọtụrụ ndị ahịa. Echiche ọ bụla nke ndị ahịa bụ ọkwa nke ọganihu anyị, ntụkwasị obi nke ndị ahịa bụ ike anyị.
Njikwa iguzosi ike n'ezi ihe
Magburu onwe imewe otu
Enterprise nsọpụrụ: ngwaahịa na -exported Southeast Asia, Europe, ezi ọrụ mba ọzọ ahịa otuto. A na-eresị ụlọ ọrụ azụmaahịa uwe ụlọ, ikike imewe dị mma, ọsọ nzaghachi ngwa ngwa, ọrụ azụmaahịa azụmaahịa.
Ogo ngwaahịa bụ ndụ ụlọ ọrụ, nyocha ngwaahịa na -aga n'ihu na usoro mmepụta anyị niile. Site na nyocha nke mmepụta akwa embryo, embroidery, na mgbe ahụ ruo ngwaahịa agba agba edoghị anya, ihe mkpuchi na -efu, nyocha, ịkpa akpa. Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ anyị iji hụ na ọnụ ala na ngwaahịa dị elu.
Ngwa lọjistik anyị na -arụ ọrụ nke ọma ma dịkwa ọnụ ala, isi obodo nke ịkekọrịta akụrụngwa ụgbọ elu mba, nwere ike dabere n'ọchịchọ ndị ahịa, ọnọdụ ụgbọ elu n'oge na nhọrọ nke ụzọ dị mma, na nnyefe oge. Ningbo Port bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke abụọ kacha ibu na China, yana ọrụ mbupu dị mfe yana ngwa ngwa ruo ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri dị n'ụwa.